(၄) ဥပစ္ဆေဒကကံဖြင့် သေခြင်း။
သတ္တဝါတို့မှာ ဤသေခြင်း ၄-မျိုးအနက် တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် သေကြရ၏။
(၁)ကံ = နောက်ဘဝမှာ ပဋိသန္ဓေအကျိုးပေးတော့မည့်
(မသေမီ ယခုဘဝတွင် ပြုခဲ့သော ကံများလည်း ဖြစ်နိုင်၏)
(ဥပမာ – ကျောင်းဆောက်ရာ၌ သင်္ကန်းအလှူ,
အာရုံခြောက်ပါးလုံး၌ ဖြစ်၍ ထိုက်သည့်အားလျော်စွာ
(၃)ဂတိနိမိတ် = အနာဂတ်ရောက်ရမယ့်ဘဝ တွေ့ကြံရလတံ့သော အာရုံ။
(ဥပမာ – အမိဝမ်းရေ၊ ငရဲဘုံ),
“ထိုရောက်မည့်အရပ်တွင် တွေ့ကြုံခံစားရမည့် အရာများ”
(ဥပမာ – လင်းတ၊ ခွေး၊ ငရဲမီး၊ ငရဲထိန်း၊
ပဋိသန္ဓေအကျိုးပေးတော့မည့် ကံ ၊
ကံမ္မနိမိတ် နှင်. ဂတိနမိတ် တို.သည် မသေမီ ဘ၀မှ မဟုတ်ဘဲ
ရှေးရှေးဘ၀များစွာက လည်း ကံ ၊ ကံမ္မနိမိတ် နှင်.
ဂတိနမိတ် တို.လည်း ဖြစ်နိူင်ပါသည်။
(အကျယ်ကို ကံမ္မဖလသုတ်တော်တွင် ဖတ်ရှုနိူင်သည်။)
အခြားမရှိ နောက်ဘ၀တွင် ပဋိသန္ဓေစိတ် ဖြစ်သည်။
♦ သေခြင်းနှင်.ပတ်သတ်၍ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ များ အထူးသိရန်
ဒိဋ္ဌိ နှစ်ပါးကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
သဿတဒိဋ္ဌိ ၊ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ နှစ်ရပ်သည် ရုပ်နာမ်အပေါ်၌
အတ္တစွဲလမ်းမှုကို အရင်းခံ၍ ဖြစ်၏။
♦ “ရှေးဘဝက အတ္တဖြစ်သော ရုပ် သို့မဟုတ် နာမ်သည်ပင်
♦ “ရှေးဘဝက အတ္တဖြစ်သော ရုပ်နာမ်ဟူသမျှနှင့် လုံးဝ
အဆက်အသွယ် မရှိ ပြတ်၏”ဟု ယူလျှင်
♠ ထိုဒိဋ္ဌိနှစ်မျိုးမှ ကင်းလွတ်ဖို့ရာ
“ရှေးဘဝက အကြောင်းနှင့်လည်း မကင်းတတ်၊
♠ ဘဝသစ်၌ ပဋိသန္ဓေဝိညာဏ်သည် ဘဝဟောင်းက
ရုပ်နာမ်များ တိုက်ရိုက် ပြောင်းရွှေ့လာခြင်းမဟုတ်။
ဘဝဟောင်းက အကြောင်းများနှင့်လည်း မကင်းနိုင်။
♠ တောင်အနီး၌ ဟစ်အော်သော အသံသည်
တောင်နံရံကို တိုက်ခိုက်မိသောအခါ ‘ပဲ့တင်သံ’
ပဲ့တင်သံသည် မူလအော်သံလည်း မဟုတ်။
ထို့အတူ ပဋိသန္ဓေဝိညာဏ်သည် ဘဝဟောင်းက
ဘဝဟောင်းက အဝိဇ္ဇာ ၊ တဏှာ၊ သင်္ခါရ အကြောင်း
♠ ဆီမီးတစ်ခုမှ ဆီမီးကူးညှိရာ၌ ဒုတိယမီးသည်
ပထမဆီမီး၏ အဆက်လည်း မဟုတ်၊
♠ တံဆိပ်နှိပ်ရာ၌ တံဆိပ်ရာသည် မူလတံဆိပ်၏
မူလတံဆိပ်နှင့်လည်း မကင်းနိုင်ပုံကို ဥပမာဆောင်၍ ပြကြသည်။